Crane fanamboarana, milina vano, serivisy crane, motera masinina - XJCM
Crane terrain terrain
Mitsangana Tower Crane
Fizarana lehibe amin'ny firafitra
Firafitry ny vano
Fitaovana fananganana excavator
Loader firafitra ampahany
Crane tariby manainga
XJCM dia orinasam-teknolojia avo lenta nasionaly izay mamolavola matihanina, mamokatra ary mifampiraharaha amin'ny crane terrain terrain, crane truck, tower crane ary milina fananganana hafa.
Manangana crane tower
Ho fanampin'ny vokatra avo lenta, XJCM dia manome serivisy manerantany azo antoka. Midika izany fa avelanay ianao hiasa am-pilaminana sy amin'ny fomba mahomby - na dia amin'ny toe-javatra faran'izay mafy aza.
crane tilikambo finday
Xaneo XJCM marika vanja kamiao kely 12 taonina
Vano finday XJCM 80 taonina amidy
Sakan'ny fantsona 24 taonina
Crane tariby manandratra marika XJCM
Kamio XJCM marika 25 taonina misy crane amidy
Milina fanodinana milina tery 30 Ton
XJCM marika Self Loading ary mampidina Sanitatio ...
Niorina tamin'ny 2002, Xuzhou Jiufa Construction Machinary Co., Ltd (XJCM). dia orinasam-pananana manana renivohitra fampiasam-bola RMB16 tapitrisa. Ny orinasanay dia mandrakotra velarantany 53000 metatra toradroa, 38 an'arivony amin'izany dia ho an'ny atrikasa. Izahay dia manana fitaovana maherin'ny 260 vaovao sy mandroso. Manokana izahay amin'ny famokarana firafitry ny milina fananganana lehibe ary ny fahaizanay amin'ny famokarana isan-taona dia 20 000 metric taonina. Masinina haitao avo lenta ho an'ny fifehezana isa, famafana, fametahana ary fitsaboana hafanana no ampiasaina amin'ny dingan'ny famokarana anay. Ny vokatra lehibe XJCM dia ny crane terrain, ny crane kamiao, ny crane tower-self-pipire, pipelayer multifunctional ary faritra maro amin'ny milina fananganana. Azo antoka fa manana kalitao manara-penitra izy ireo. Ny cranes andiany RT, ny cries an'ny QY andiany ary ny cries an'ny tower JFYT dia aondrana any Amerika Avaratra. Amerika atsimo, Afrika, Moyen Orient, Azia Andrefana, Azia atsimo atsinanana ary hafa mihoatra ny firenena 30 sy faritra.
Ny "seranam-piaramanidina RT series" eny an-dàlambe "fikarohana tsy miankina ary novolavolain'ny orinasa dia nekena ho" vokatra teknolojia avo lenta "avy amin'ny Departemantan'ny Siansa sy ny Teknolojia ao amin'ny faritanin'i Jiangsu ary voatanisa ao amin'ny" Tetikasa fampisehoana indostrialy momba ny torolàlana nasionaly "nataon'ny Ministera. ny siansa sy ny teknolojia.
XJCM dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana rafitra lehibe amin'ny milina fananganana. Manome siny excavator izahay, siny loader, sandry rocker, booms, frame eo aloha, frame aoriana, horonan-tsipika sy vokatra hafa mifandraika amin'ny XCMG, CAT, FOTON, LIUGONG, HELI forklift, YUTONG ary maro hafa orinasa milina malaza hafa any Sina.
Boom marika XJCM ho an'ny vano
Loader aoriana rafitra
XJCM famatsiana Crane boom
XJCM ampanjifaina ny Bucket Model Loader rehetra
Ny mpanamboatra sinoa dia amidy 2ton ka hatramin'ny 100ton Excava ...
Address:NO.1 Dapeng Industrial Park, Distrikan'i Tongshan, Xuzhou, Jiangsu, Sina